Patrice Motsepe, mpanapitrisa sady mpirotsaka notohanan’ny FIFA, no lasa filohan’ny baolina kitra afrikàna · Global Voices teny Malagasy
Nisintaka mba hanomezana tombony an'ilay Afrikàna Tatsimo ireo mpifaninana hafa
Nandika (fr) i Estelle Clamy
Voadika ny 30 Novambra 2021 13:16 GMT
Patrice T. Motsepe, nandritra ny fihaonambe ara-toekarena erantany tao Davos, tamin'ny 2009. Sary: swiss-image.ch/Monika Flueckiger (CC BY-NC-SA 2.0)
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana dia mitondra mankany amina lahatsoratra anglisy daholo ny rohy ato].
Ny 12 Martsa lasa teo no tokony natao ny fifidianana teo anivon'ny Kaonfederasiôna afrikàna misahana ny baolina kitra (CAF), rantsana ambony indrindra mitantana ny baolina kitra aty Afrika. Saingy, mba hahazoana antoka ny handresean'ilay Afrikàna Tatsimo voalohany nirotsaka ho amin'io toerana ambony io, tsy mbola vita akory ny fihodinana voalohany dia efa nitsahatra ny zavatra rehetra [fr], taorian'ny nisintahan'ireo hafa nirotsaka hofidiana.
Ny mpandresy, Patrice Tlhopan Motsepe, dia Afrikàna Tatsimo mpanapitrisa, 58 taona, tompona indostria fitrandrahana harena ankibon'ny tany ary filohan'ny Mamelodi Sundowns Football Club hatramin'ny 2003. Izy no iray amin'ireo olona manankarena indrindra ao Afrika ary zaodahin'ny filohan'i Afrika Atsimo, Cyril Ramaphosa.
Efatra ireo mpifaninana hisolo ny filoha teo aloha, Ahmad Ahmad, avy any Madagasikara, izay mbola nirotsaka hofidiana ihany koa mandrapahatongan'ny fampiatoana ny firotsahany noho ny fiampangàna azy any Frantsa ho nanao kolikoly. Augustin Senghor, avy any Senegaly, Ahmed Yahya, avy any Maoritania ary ilay Ivoariàna Jacques Anouma no nilahatra tamin'i Patrice Motsepe hiezaka haka ilay anaram-boninahitra ambony indrindra ao amin'ny CAF.
Ny CAF no misolo tena ireo fikambanana sy federasiônam-pirenena marobe misahana ny baolina kitra mifaninana ao amin'ny tanibe, nasiônaly na eo an-toerana. Ny federasiôna, izay ao Kairo, Ejipta no foiben-toerany amin'izao fotoana izao, dia misy mpikambana tsy latsaky ny 56 izay manome azy ny sata maha-federasiôna lehibe indrindra ao anatin'ny FIFA.
Taloha kelin'ny fifidianana, tamim-pientanentanana no nanambaràn'ny Federasiôna misahana ny baolina kitra ao Afrika Atsimo, tamin'ny alàlan'ny kaonty Twitter-ny, momba ny vintana ananan'ny olony:
Ho lany ho filohan'ny CAF i Patrice Motsepe amin'ity herinandro ity, taorian'ny fampitsaharana mandritra ny dimy taona an'i Ahmad, izay nahenan'ny Tribonaly mpanelanelana ara-panatanjahantena ho roa taona tamin'ny Alatsinainy teo.
Patrice Motsepe no tsy dia nisy mpahafantatra indrindra tamin'ireo efatra nirotsaka hofidiana. Kanefa, marobe ireo mpitazana mahita azy ho toy ny mpirotsaka ankafizin'ny FIFA.
Tany ampiandohany Martsa, nanokanan'ny Soccerladuma, gazetiboky be mpihaino indrindra sy mpiresaka ny baolina kitra ao Afrika, lahatsoratra iray ny momba ny fanohanana lazaina fa azon'i Patrice Motsepe avy amin'ireo mpitantana ambony ao amin'ny FIFA :
Misy tatitra avy any Kenià toa mahatonga hieritreritra fa efa tsy lavitra intsony ny toerana maha-filohan'ny CAF azy i Patrice Motsepe, miaraka amin'ny fanampian'ny filohan'ny FIFA, Gianni Infantino. Mifaninana hahazo ny iray amin'ireo toerana be mpitsiriritra indrindra eto amin'ny tanibe ny tompon'ny klioba Mamelodi Sundowns, mifaninana amin'i Jacques Anouma avy any Côte d’Ivoire, Augustin Senghor avy any Senegaly sy Ahmed Yahya avy any Mauritanie. Ho an'i Fancis Gaitho, Keniàna mpanao gazety manampahaizana manokana momba ny baolina kitra, nahazo tosika ny firotsahan'i Motsepe taorian'ny fifanarahana nifanaovan'i Gianni Infantino, filohan'ny FIFA, sy MM. Senghor ary Yahya, izay nampanantenaina ny toeran'ny filoha lefitra ho tambin'ny fisintahan'izy ireo mba hanomezana tombony an'i Patrice Motsepe.
Augustin Senghor, filohan'ny federasiônan'ny baolika kitra ao Senegaly no voalohany nisintona ny firotsahany tamin'ny 5 Martsa, narahan'i Jacques Anouma sy Ahmed Yahia ny ampitson'io.
Tao amin'ny tranonkala InsidetheGames.biz, nisy tsilian-tsofina avy amin'ny FIFA toy ny nilaza hoe zavatra nokendrena tamin'ilay fifanarahana ny hiantohana ny fisian'ny fampiatiana bebe kokoa sy tsy dia hisian'ny fisarantsarahana be loatra eo amin'ireo mpitantana fototra ny baolina kitra afrikàna. Nanambara i Patrice Motspe hoe:
Mila fahendrena itambarana ny baolana kitra afrikàna, fa koa mila talenta miavaka sy fahendren'ny filoha tsirairay isaky ny firenena sy ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanana.
Tanisain'ny tranonkala InsidetheGames.biz ihany koa ireo tatitra milaza fa tany alavitry ny mason'ny rehetra tany no nanaovan'ny FIFA ilay fifanarahana tamin'ireo mpirotsaka hofidiana mba hiantohana ny handresean'ilay olona ankafizin-dry zareo. Araka izany dia nampanantena toerana roa ny FIFA, filoha lefitra sy iray hafa ho an'ny mpanolotsaina manokana, ho tambin'ny fisintahan-dry zareo tsy hofidiana. Toa hoe nanaiky ny ho filoha lefitra i Augustin Senghor sy Ahmed Yahya, ary ao anatin'io fandaminana vaovao io, i Jacques Anouma no ho mpanolotsaina an'i Patrice Motsepe.
Misy ny siosion-dresaka mandeha fa toa hoe nanaiky ny hampitsahatra ny fampielezankeviny ho filohan'ny CAF ilay Senegaly Augustin Senghor sy ilay Maoritaniàna Ahmed Yahya. Araka ny vaovao sasantsasany, dia hanohana an'i Patrice Motsepe ireto olona roa ireto manomboka izao, izay hitarika kosa azy ireo amin'ny maha-filoha lefitry ny CAF azy roa.
Tohizan'ilay tranonkala :
Andro vitsivitsy taorian'ny niverenan'i Gianni Infantino, filohan'ny FIFA, rehefa avy nanao fitsidihana tany Afrika, no vita ilay voalaza fa fifanarahana.
Hanorina ny baolina kitra afrikàna
Ankizy milalao baolina fandàka eo amin'ny torapasika iray. Sary an'i Sisi tao amin'ny Pixabay
Nandritra ny fanolorany ny fandaharam-potoanany ho an'ny fifidianana, nomeny lohateny hoe « Hanorina ny baolina kitra afrikàna ka hanao azy ho ny tsara indrindra », nomen'i Patrice Motsepe ny fandaharanasany ary nambarany fa hataony ho laharam-pahamehany ireto zavatra manaraka ireto :
fitantanana tsara, ny fomba fanao tsara indrindra manerana izao tontolo izao, fampiasambola ho an'ny fotodrafitrasan'ny baolina kitra afrikàna, fampitomboana ny valisoa, ary hatramin'ireo fiovàna sata…
Nisisihany ihany koa, nandritra ny kabariny naharitra ora telo ho fanombohana ny fandaharanasany, ny lanjan'ny firotsahana an-tsehatry ny tsy miankina, indrindra fa ny famoronana fiaraha-mitantsoroka, ankoatra ireo mpiara-mitantsoroka goavana hafa, sy ny “sponsorings”.
Nataon'i Patrice Motsepe izay niantsoana ireo namany sy mpifaninana taminy mba hivoizana sary vaovao manerana ny tanibe afrikàna.
Ny fahalaniany no hanome an'i Afrika Atsimo ny toerany voalohany ho amin'ny toerana ahafahana manoso-kevitra eo anivon'ny tanibe. Patrice Motsepe ihany koa no voalohany avy amin'ny tany mampiasa ny teny anglisy lasa filohan'ny CAF, firenena iray izay ny anglisy dia iray amin'ireo fiteny ôfisialy, tsy toy ireo filoha nitantana fahiny izay avy amina firenena mampiasa ny teny frantsay avokoa.
Nandritra ny antsafa iray ho an'ny mpanao gazety dia nanambara i Patrice Motsepe hoe : « Te-hitondra ny anjara birikiko aho, amin'ny lafiny rehetra, mba hampiasàna ny fanatanjahantena ho fampiraisana ny Afrikàna. »
Niger, Sierra Leone ary Botswana dia samy nanome ny fanohanany azy daholo. Danny Jordaan, filohan'ny federasiôna ao Afrika Atsimo dia nidera an'i Patrice Motsepe, tamin'ny fitanisàna ny « fahaizany mifehy fandraharahàna » sy ny « fahalalàny amin'ny resaka fitantànana ary ny fandraharahàna amin'ny ankapobeny».
Nanome toky i Patrice Motsepe fa:
“We will succeed and we will make African soccer competitive at the international level.”
Hihoarantsika ireo fanamby ary ho vitantsika ny hametraka ny baolina kitra afrikàna ho amin'ny lenta iraisampirenena.
Zavatra tsy maintsy ho atrehan'ny mpitantana vaovao ny CAF ny fitantanana ireo fifanintsanana hoavy, isan'ireny ny fifanintsanana hiady izay ho tompondakan'i Afrika (CAN) hanomboka ny volana Martsa, ary indrindra fa miomana ho amin'ny fifanintsanana fototra manomboka amin'ny Janoary 2022 ireo ekipa.
Tsy maintsy atrehan'ny federasiôna ihany koa ny fanambin'ny « fidirana ho matianina » eo amin'ny tanibe ; io dia noho ny ahiahy fisiana kolikoly nivoitra tato anatin'ny taona roa farany, ary nahavoarohirohy maro tamin'ireo mpitantana lalao. Nomarihan'ny filoha vaovao ihany koa fa mihevitra izy ny hametraka ny rafitra VAR [Video Assistant Referees – (angl.)] « ho an'ireo fifanintsanana lehibe rehetra karakarain'ny CAF ».